Howlgalka UNSOM oo wafdi ka socday Maanta ka degay Baydhabo Xafiisna ka furanaya – SBC
Howlgalka UNSOM oo wafdi ka socday Maanta ka degay Baydhabo Xafiisna ka furanaya
Posted by Webmaster on June 4, 2013 Comments
Ka dib markii shalay lagu wareejiyay si toos ah xilkii xighaye nimo ee Soomaaliya u qaabisan Banki Moon, Mr Nicloes key ayaa maanta waxa uu si toos ah u bilaabay Howgalkiisa shaqo .
Wafdi ka socda Howlkan loogu magacdaray UNSOM ayaa maanta ka degay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen xubnaha maamulka gobolka iyo degmada Baydhabo.
Raniya Ibrahim oo ah Haweeney qeyb ka ah howlgalkan UNSOM ee xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa hogaamineysay Wafdigan waxaana halkaasi ay u tagtay sidii ay u furi laheyd xafiiska UNSOM ee Magaalada Baydhabo.
Waxay Haweeneydan la yeelatay kulan kala warqaadasho ah xubnaha sar sare ee maamulka gobolka baay iyo kan degmada Baydhabo iyadoo la socodsiisay doonitaanka ka howlgalka gobolka Howlgalkan UNSOM, ujeedadiisuna ahaa kulanka sidii ay uwax badan uga ogaan laheyd xaaladaha guud ee Baydhabo iyo gobolka.
Horay ayaa loo shaaciyay in Howlgalkan UNSOM ku shaqeyn doono qaab ka bedelan nidaamkii hore ee howlgalkii UNPOS, uuna xarumo kala duwan ku yeelan doono magaalooyinka waaweyn ee dalka Sida Baladweyne, Hargeysa, Garowe iyo Baydhabo.
SBC International Baydhabo.